Izindawo zokuhlala e- Battenhurst Barn - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e- Battenhurst Barn
169 okushiwo abanye
Stonegate, England, i-United Kingdom
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Caroline
U-Caroline Ungumbungazi ovelele
IBattenhurst Barn itholakala emaphandleni amahle aseSussex eduze kwedolobhana elihle laseBurwash lapho uzothola khona iBatemans ikhaya lapho uRudyard Kipling ake ahlala khona kanye nokukhetha okuhle kwamashibhi, izitolo zetiye nezitolo zakudala. Njengoba kunezindledlana zezinyawo zomphakathi ezisuka esibayeni kuyindawo ekahle yokuphumula kodwa ihora elilodwa kuphela ngesitimela ukuya eLondon kanye nengxenye yehora ukuya endaweni esogwini yaseHastings.
Isanda kuguqulwa, i-Barn ivulekile futhi yesimanje kodwa ine-rustic charm! Uzosebenzisa ngokukhethekile i-Barn esezindaweni zase-Oast ukuze ukwazi ukuza futhi uhambe ngokuthanda kwakho futhi ube nokhiye wakho. Unegumbi lakho lokulala elinemibhede ephindwe kabili, igumbi lokugezela kanye nendawo yonke evulekile yesitezi esingaphansi enekhishi. Ungakwazi futhi ukujabulela ingadi enetafula elikhulu langaphandle nezihlalo zamabhentshi ezine-BBQ. Izinsiza zetiye nekhofi zihlinzekwa. Ngisendlini oast opposite uma ungidinga...
I-HDTV engu-55" ene- I-Amazon Prime Video, I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.88 out of 5 stars from 169 reviews
4.88 · 169 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-169
Inqolobane itholakala e-Weald endaweni Yobuhle Bemvelo Okuvelele.(AONB) Kunezindawo eziningi zokuhamba ezimangalisayo, amakhaya amahle nezinqaba ongazivakashela, kanye namadolobhana amahle okuthenga umkhiqizo wasendaweni. Kukhona indlela yezinyawo yomphakathi esuka esibayeni iya eBurwash nangale kwayo. Idolobhana le-spa laseRoyal Tunbridge Wells liqhele ngamamayela ayi-10 kuphela.
Ujoyine ngo-Juni 2012
As a teacher of English as a Second language I am passionate about travel and meeting people from all different cultures and backgrounds.
I can't wait to meet you and share with you the beauty of the East Sussex countryside and our lovely Oast house.
I can't wait to meet you and share w…
Ngikuhlanganisele iphakethe lolwazi kodwa ngicela ukhululeke ukubuza noma imaphi amathiphu endawo njengoba sengihlale lapha e-Oast cishe iminyaka engu-20!
Hlola ezinye izinketho ezise- Stonegate namaphethelo